विनोद परिवर्तित २१ जुलाई/सौल अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) को हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट कोरिया च्याप्टर इतिहासमै पहिलो पटक केन्द्रमा पुगेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएका च्याप्टर अध्यक्ष डा. प्रमोद सारंग ५ सय ८८ मतका साथ निर्वाचित भएका हुन् । वि.सं. २०५५ सालमा कविता लेखनमार्फत नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका डा. सारंगले हालसम्म आइपुग्दा […]
सौल ,कोरिया- असार २९ अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज ( अनेसास)को अधिवेशनमा कवि तथा गीतकार प्रमोद सारंगले उम्मेदवारी दिएका छन। विगत दुई दशकदेखि नेपाली भाषा साहित्य र सङ्गीतको उन्नयनमा उल्लेखनीय योगदान दिएका उम्मेदवार सारंगले विभिन्न संघ संस्थामा रहेर काम गरिसकेका छन! कोरिया क्याप्टरमा २ पटकसम्म अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका सारंगले कोरिया च्याप्टरलाई आफ्नो कार्यकालमा दोस्रो Best […]
ट्रप्पले भेटे किम जंग उन , ट्रप्प बने उत्तर कोरियामा पाईला टेक्ने प्रथम अमेरीकी राष्ट्रपति !
काठमाडौं, असार १५ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन कोरियाली सीमा क्षेत्रमा वार्ताका लागि उपस्थित भएका छन । अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यहरुका अनुसार बार्ताका लागि कोरिया आइपुग्नुभएका अमरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई नेता किमले हार्दिकता पुर्वक स्वागत गर्नुका साथै दुवै नेताले गैरसैन्य क्षेत्रमा हात मिलाएर शान्तिको सन्देश दिनुभएको छ । कोरियाली भुमीका केहीबेरमा ट्रम्प […]
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुइदिने भ्रमणका लागि कोरियामा
कोरिया भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २ दिने दक्षिण कोरिया भ्रमणका दक्षिण कोरिया आइपुगेका छन्,खुल्ला अर्थ ब्यवस्थामा दुइ देशबिच छलफलको साथसाथै दक्षिण कोरियाले प्रदान गर्ने ग्लोबल शान्ति पुरस्कार ग्रहण गर्न आएका पिएम मोदिलाई स्वागतका लागि कोरियाका विशिष्ट ब्यक्ति, भारतिय मुलका नागरिक इन्छन बिमानस्थलमा पुगेका थिए। कोरियाका रास्ट्रपति मुन जे इन को विशेष निमन्त्रणामा कोरिया आएका हुन् […]
कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति बाकलाई १५ बर्षको जेल सजाय
सौल।दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति लि म्यंग बाकलाई १५ बर्षको जेल सजाय हुने भएको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा सउल जिल्ला अदालतले बाकलाई १५ बर्षको जेल सजाय र १३ बिलियन वनको जरिवना सहितको फैसला सुनाएको हो।
प्योङयाङमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति मुनले कोरियाली प्रायद्वीपमा अब शान्तिका दिन सुरू भएको बताए। उत्तर कोरियाली नेता किमले कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक हतियार र त्रासरहित बनाउन आफूहरूबीच सहमति भएको बताए। अमेरिकाले त्यही अनुसारको ‘डिल’ गरे योङ्बोस्थित आणविक केन्द्र पनि बन्द गर्न किम सहमत भएका छन्। राष्ट्रपति मुनले उत्तर कोरिया विदेशी विज्ञ परीवेक्षकको सहभागितामा मुख्य […]
उत्तरकोरियाको राजधानीमा अंकमाल गर्दै दक्षिण र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपती
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाइ इन तीन दिने भ्रमणका क्रममा उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङ पुगेका छन्। उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच सुरू भएको आणविक नि:शस्त्रीकरण वार्ता समस्यामा परेपछि सुचारु गराउने प्रयास स्वरूप मुन प्योङयाङ पुगेका हुन्। उनी विशेष विमानमार्फत् सोमबार बिहान प्योङयाङ उत्रिएका हुन्। मुनलाई स्वागत गर्न उत्तर कोरियाली नेता किम जोम उन विमानस्थल पुगेका थिए। […]
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हत्या गर्ने षड्यन्त्र रच्ने लेखक पक्राउ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्याको षड्यन्त्र रचेको भन्दै क्रान्तिकारी विचारधाराका लेखक तथा सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा रावलाई महाराष्ट्र प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको हत्या गर्ने षडयन्त्र रचेको र महाराष्ट्रको भिमा कोरेगावँ हिंसामा संलग्नता भएको आरोपमा रावलाई हैदराबादबाट पक्राउ गरिएको हो । हैदराबादमा रहेका रावका दुई जना छोरीको घरमा पनि महाराष्ट्र प्रहरीले छापा मारेको छ […]
दुई सातापछि इन्डोनेसियामा फेरि शक्तिशाली भूकम्प, २ जनाको मृत्यु
४ भदौ, काठमाडौं । इन्डोनेसियाको पर्यटकीय द्वीप लोम्बोकमा आइतबार साँझ दुईवटा शक्तिशाली भूकम्प गएका छन् । भूकम्पमा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने केही घाइते भएका छन् । लोम्बोक केन्द्रबिन्द भएर गएको ७.० रेक्टर स्केलको भूकम्पले ४६० जनाको मृत्यु भएको दुर्इ सातापछि इन्डोनेसियामा पुनः शक्तिशाली भूकम्प गएकाे हाे । अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेका अनुसार आइतबार साँझको […]
इक्वेडरको बस दुर्घटना, १२ जना कोलम्बियालीको मृत्यु
क्युटो, इक्वेडर । इक्वेडरमा एउटा बस दुर्घटना हुँदा १२ जना कोलम्बियाली नागरिकको ज्यान गएको छ । इक्वेडरमा भएको यस दुर्घटनामा परी आफ्ना १२ जना नागरिकको ज्यान गएको कोलम्बिया सरकारले बुधबार जानकारी दिएको छ । त्यस दुर्घटनामा परी कूल १९ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा १२ जना कोलम्बियाली, चार भेनेजुएली र तीन जना इक्वेडरका […]
सुडान, ३० साउन । सुडानको राजधानी खार्तुमबाट उत्तरमा रहेको नाइल नदीमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा स्कुल जाँदै गरेका कम्तीमा २२ जना बालबालिका डुबेको स्थानीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सुना समाचार संस्थाका अनुसार, दुर्घटनामा डुङ्गा चढेकी एक महिलाको पनि मृत्यु भएको छ । डुङ्गामा ४० भन्दा बढी बालबालिका रहेको अनुमान गरिएको छ । सुडानी गृहमन्त्रालयका अनुसार उद्धार कार्य […]
वासिङटन, २९ साउन । अफगानिस्तानको हेलमन्ड प्रान्तमा भएको बम विस्फोटमा परी एक अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागनले सोमबार जानकारी दिएको छ । अमेरिकी सैन्य बलका ३६ बर्षीय एक कर्मचारीको आइतबार भएको विस्फोटमा परी मृत्यु भएको हो । अमेरिकी सेनाले यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ । तालिबान विरुद्धको लडाईमा अफगान सुरक्षाफौज अग्र […]
मुम्बई / टर्कीको वित्तीय सङ्कटको प्रभाव स्वरुप लगानीकर्ताहरुमा देखिएको त्रासका कारण अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँको मूल्य खस्किएको छ । मङ्गलबार बजार खुल्दा एक अमेरिकी डलर भारु ७० मा किनबेच भएको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो । पहिल्यैदेखि दबाबमा कारोबार भइरहेको भारतीय मुद्राको स्थिति मङ्गलबार बिहानदेखि नै खस्केको थियो । टर्कीको मुद्रा लीराको […]
हराएको विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटियाे
जकार्ता / इन्डोनेसियामा शनिबार हराएको एक विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ । साथै सो विमानमा सवार आठजना यात्रुको शव पनि भेटिएको समाचारमा जनाइएको छ । पूर्वी इन्डोनेसियाको पहाडी इलाकामा सो विमान आइतबार विहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो । पूर्वी इन्डोनेसियाको एक दुर्गम पपुवा प्रान्ततर्फ जाँदै गरेको सो विमान शनिबार अपराह्नदेखि हराएको थियो । करिब ४० […]
रोमानिया विरोध प्रदर्शनमा ४५० भन्दा बढी घाइते
बुखारेस्ट, रोमानिया, २६ साउन । रोमानियाको राजधानी बुखारेस्टमा गरिएको विशाल प्रदर्शनमा ४५० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् भने ३० प्रदर्शनकारीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको रोमानियाली प्रहरीले शनिबार जनाएको छ । रोमानियाको राजधानी बुखारेस्टमा शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा दशौँ हजार (करीब ८० हजार) रोमानियालीको सहभागिता रहेको विभिन्न स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । भ्रष्टाचार आरोपमा वामपन्थी सरकारको राजिनामा […]
चीनको अर्को यस्तो चमत्कार : १७ तला जमिनमुनि, २ तला पानीमुनिको होटल [फोटोफिचरसहित]
चीनले हालै विश्वको सबैभन्दा भव्य, ठूलो तथा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायो, राजधानी बेइजिङमा । चीनको कीर्तिमानीको यो रफ्तार यत्तिमा मात्र रोकिनेवाला छैन । अब छिटै अर्को आश्चर्यजनक तथा कीर्तिमानी भौतिक संरचनाले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा चर्चा कमाउँदैछ । चीनको सांघाइमा एउटा यस्तो होटल बन्दैछ जसलाई डिप पिट होटेल अर्थात् गहिरो खाल्डोको होटेल भन्दा पनि हुन्छ […]
साना, यमन, २५ साउन । उत्तरी यमनमा विद्रोहीको बलियो प्रभाव रहेको एक बजार इलाकामा साउदी अरेबियाआवद्ध क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा कम्तीमा २९ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । साउदी अरेबियाआवद्ध संयुक्त गठबन्धनले यो आक्रमण गरेको रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसीआरसी) ले जानकारी दिएको छ । संयुक्त गठबन्धनका प्रवक्ता तुर्कि अल–मलिकीले साउदी अरेबियामाथि हुथी बिद्रोहीले घातक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बदलामा कारबाही […]